Vaovao - Lamba tenona 3D Fiberglass
3-D fanamboarana lamba spacer dia hevitra vao novolavolaina. Ny tontolon'ny lamba dia mifamatotra mafy amin'ny alàlan'ny kofehy mitsivalana mitsivalana izay mifangaro amin'ny hoditra. Noho izany, ny lamba spacer 3-D dia afaka manome fanoherana tsara ny fihodinan'ny hoditra, ny faharetana tsara ary ny fahamendrehana ambony. Ho fanampin'izany, ny habaka interstitial an'ny fananganana dia mety ho feno foam-panala mba hanomezana tohana synergistic miaraka amina antontam-pitongilanana.
Toetra mampiavaka ny vokatra: